Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Terminalka ugu weyn ee Madaarka ee Tibet ayaa Hawlgallada Bilaabay
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Shiinaha • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Terminalka cusub wuxuu ka caawin doonaa garoonka inuu gaaro bartilmaameedka lagu maareeyo 9 milyan oo rakaab ah iyo 80,000 tan oo xamuul iyo boosto ah marka la gaaro 2025, sida laga soo xigtay garoonka.
Tan iyo dabayaaqadii 2012, Shiinuhu wuxuu ballaarinayey maalgelinta kaabayaasha ee Tibet.
Gobolka ayaa bilaabay wadar ahaan 130 marinno hawada ah, iyadoo 61 magaalo ay ku xirnaayeen duulimaadyo.
Madaarka Lhasa Gonggar waa madaarka ugu weyn Tibet.
Gegida dayuuradaha ee ugu weyn koonfur -galbeed ee ismaamulka Tibet ee Shiinaha ayaa maanta shaqadiisa bilaabay, kadib dhisme ka badan saddex sano.
Terminalka ugu Weyn ee Madaarka Tibet oo Hawlgalo Bilaabay
Terminalka cusub ee gegida diyaaradaha ee Lhasa Gonggar wuxuu u eg yahay ubax lotus xagga sare ah. Waxay ka caawin doontaa garoonka inuu gaaro yoolka ah in la maareeyo 9 milyan oo rakaab ah iyo 80,000 oo tan oo xamuul iyo boosto ah marka la gaaro 2025, sida uu sheegay garoonka.
Waxay ku taallaa Gobolka Gonggar ee Magaalada Shannan waxayna u dhowdahay xarunta gobolka ee Lhasa, Gegida Diyaaradaha ee Lhasa Gonggar waa gegida diyaaradaha ee ugu weyn Tibet.
Tan iyo dabayaaqadii 2012, Shiinuhu wuxuu ballaarinayey maalgelinta kaabayaasha ee Tibet. Gobolka ayaa bilaabay wadar ahaan 130 marinno hawada ah, iyadoo 61 magaalo ay ku xirnaayeen duulimaadyo. Tirada safarada rakaabka ee lagu sameeyay garoomada diyaaradaha ayaa ahaa 5.18 milyan sanadka 2020.